पिकनिकमा महिलाले खिचिन् छोराको फोटो, घर आएर फोटो हेर्दा सातोपुत्लो उड्यो – Etajakhabar
पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हुन्जा नामक उपत्यकामा जातिका मानिस बसोबास गर्छन् । उनीहरुको सरदर आयु पनि लामो छ । सदावहार देखिन्छन् र स्वस्थ हुन्छन् । खानपान र वातावरणले उनीहरुलाई निकै स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाएको छ । जसका कारण लामो समय बाँच्छन् र ढिलोसम्म बच्चा जन्माउँछन् ।
हुन्जाका बासिन्दाको औसत आयु नै एक सय वर्षभन्दा माथि छ । ६० वर्षीया महिला पनि भर्खरकि युवतीलाई माथ दिन सक्ने चम्किलो अनुहारका छन् । उनीहरुको सुन्दरता, स्वस्थ जीवन र प्रजनन शक्तिबारे चासो र अध्ययन भइरहेको छ ।
उनीहरुको पृथक प्रकारको खानपान र स्वस्थकर जीवनशैली कारण भनिएको छ । हुन्जा बसोबास गर्ने क्षेत्रमा ६० वर्षको मानिसलाई पनि युवक र युवती भनेर सम्बोधन गरिने गर्छ । सफा सुग्घर, प्राकृतिक तरिकाको शारीरिक व्यायाम, स्वस्थकर आहारले हुन्जालाई सामथ्र्यवान र लामो समय बाँच्न सक्ने मात्र नभई सामान्य महिलाले भन्दा १५ वर्ष बढी उमेरसम्म बच्चा जन्माउनसक्ने खूबी दिएको हो ।
Posted on: Tuesday, October 8, 2019 Time: 22:37:39
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बालबिवाह गर्ने बेहुला मण्डपवाटै प’क्राउ, छोरी दिने बुवा पनि समातिए
जब पूर्वसभामुख घर्तीलगायत चढेको प्लेन नउडी धावनमार्गमा गुडिरह्यो…!
अमेरिकाले गर्भवती महिलालाई अब अमेरिका छिर्न नदिने !
बिदेशमा दुर्घटनामा निधन भयो भनेका भाइको लागि पशुपतिमा चिता तयार पारेर श:व त्रिभुवन बिमानस्थलमा लिन पुग्दा…
-20243 second ago
गृहकार्य नगरेको भन्दै शिक्षकले विद्यार्थीको हात नै भाँचिदिए
-18698 second ago
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा झ’डप, मुख्यालयमै कु’टिए कुन्दनराज काफ्ले
-18155 second ago
आस्था राउत प्रहरी हि’रा’सतमा बस्नु पर्ने, चार दिन म्याद थप
-15908 second ago
प्रहरी कार्यालय पुगेकी आस्था राउतले भनिन्, ‘प्रहरीलाई सहयोग गर्न म आफै आएकी हुँ’ कानूनी रुपमा जे हुन्छ म बेहोर्न तयार छु’
-15174 second ago
-13594 second ago
-10408 second ago
प्रहरी नि’य’न्त्रणमा रहेकी गायीका आस्था राउतलाई प्रहरीले गर्दैछ यस्तो का’रवाही
-8971 second ago